१२ भाद्र २०७७, शुक्रबार १०:०८
कोरोना भाइरस कोभिड १९ ले संसार हल्लाईदिएको छ । विश्वका प्राय सबै देशहरु कोरोनाबाट प्रभावित भएका छन् । भिमकाय देशहरु, आणविक शस्त्र युक्त देशहरु, विकास र समृद्धिको व्यवहारिक अभ्यास गरेका देशहरु विज्ञान र प्रविधिले पृथ्वीलाई एउटा चिफमा कैद गर्न सक्ने देशहरु आफ्नो पिंजडामा कैद भएको छ ।
चाईनाबाट शुरु भएको कोभिड १९ युरोप, अमेरिका भम्रण गर्दै दक्षिण एसियामा उधुम मच्चाएको छ । विकसित राष्ट्रहरुको तागतलाई चुनौती दिँदै मान्छेहरुको विस्कुन लगाएर दक्षिण एसियाको भारत हुँदै नेपाल प्रवेश गरेको आज ६ महिना भयो । स्वास्थ्य सचेतना, रोगसँग लड्ने तयारी, लकडाउन, क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन, हस्पिटल, आईसियु, भेन्टिलेटर, मास्क, साबुनपानी, सेनिटाईजर, तातोपानी, बेसारपानी, गुर्जोपानी भन्दा भन्दै टेलिकमका सन्देशमुलक रिङ्गटोन, कलब्याक टोन र विज्ञापनका अनगिन्ती सन्देशहरु मानिसका लागि दिक्दार लाग्दो दैनिकी बनेको छ ।
२ जना पोजेटिभबाट शुरु भएको लकडाउनयता संक्रमितको संख्या ३५ हजार नाघिसकेको छ । र १८५ भन्दा बढीको मृत्यु भईसकेको छ ।करिब ३ करोड जनसमुदाय भएको यो सानो मुलुकमा हेर्दा हेर्दै समुदायमा भाइरस प्रवेश गरेको छ । कोभिड १९ को जन्म सँगै भएको प्रचार, प्रसार, खबरहरु अजङ्ग पहाडको रुपमा देखापर्‍यो । यसले ल्याएको तरङ्गले विश्वभरिका जनता त्रसित, भयावित र आतंकित देखियो । यसलाई सामान्य रुपमा लिइरहन र लिनु पनि हुन्थेन । विभिन्न विधिहरुको प्रयोग सँगै कोरोना नियन्त्रणका उपाय निकाल्ने कोसिसहरु भए ।
कोभिड १९ ले स्वास्थ्य क्षेत्र, स्वास्थ्य विज्ञानलाई नै चुनौती खडा गरिदियो । सुरुवातमा जनसमुदायको विश्लेषण, मनोविज्ञान, सुचना र सम्प्रेषणले यो भयङ्कर त्रासको रुपमा आयो । सबैभन्दा पहिला मानिसलाई यो रोगबाट बच्न र बचाउनका साथै भोकबाट बचाउन नै राज्य लाग्नु पर्ने थियो, त्यसको कमजोर व्यवस्थापनको कारण कोरोना नियन्त्रणतिर छैन । कुशल व्यवस्थापनको कारण चिनियाँहरुले कोरोनालाई जिते र विश्वलाई एउटा सन्देश दिए र बच्ने, बचाउने स्वास्थ्य सामग्री र जनशक्ति व्यवस्थापनमा लागे जसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्दछ ।
अमेरिका लगायतका केही देशहरुले सामान्यकरण गर्दै हेलचक्राई गरेकोले ठुलो क्षति व्यहोर्नु पर्‍यो । नेपालमा पनि यसको प्रभाव नपर्ने कुरै भएन । मानिसहरूले कोरोनालाई मनोबल र आत्मबल परास्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा बुझे । र पुष्टि पनि भयो कि जोसँग रेसिडेन्ट पावर, इम्युनिटी पावर बलियो छ उनिहरु बाच्ने र जसको छैन उनिहरु मृत्‍यु मुखसम्म पुग्ने देखियो । मानवद्धारा मानिसलाई नै आक्रमण गर्ने, सार्ने र कमजोरलाई सिध्याउने नै यसको समस्या रहेछ । यो यस्तो निर्मम र भयावह भाइरस रहेछ । यसले करुणा, अनुरोध, ईच्छा, अहंकारको अवस्था चिन्दो रहनेछ । यो भुकम्प , सुनामी, बाढिपहिरो, जस्ता प्राकृतिक विपती पनि रहेन , यो त बिरामी पर्दा, मृत्यु हुँदा, संक्रमण हुँदा समेत आफन्त, इष्टमित्र, अभिभावक र समाज सहयोगी हुन नपाउदा रहेछन् । तर राज्य, स्वास्थ्यकर्मी, प्रहरी प्रशासन र केन्द्रदेखि स्थानीय सरकारको भुमिका अनिवार्य रुपमा देखिदो रहेछ ।
सामाजिक दायित्व र जिम्मेवारीलाई बहन गरि वातावरणलाई सहज र उत्साहित साथै सामान्यिकरण गरि उपचार रेखदेख, परामर्श र प्रेरित गर्ने र जनसमुदायलाई जनताको साथमा हामी छौँ भन्ने हौसला दिनुपर्छ । प्रकृति भन्दामाथी कोहि छैन । यो विपदको घडिमा सामुहिकतामा आधारित रहेर सहयोग गर्नुपर्छ । कोभिड १९ ले मानिसहरूलाई कुनै बिभेद नगर्दो रहेछ, यसले धनी, गरिब, कालो, गोरो, केही भन्दो रहेनछ ।
कोरोनाले मानिसहरूमा खानको लागि अन्न महत्त्वपूर्ण हो भन्ने जानकारी दिएको छ । यसले पादरी, इमाम (मुस्लिम धर्मगुरु) र पुरोहितले कोरोना बिरामिलाई बचाउन सक्दैन भन्ने स्पष्ट पारेको छ । धर्तिको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा आफ्नो देश, घर र परिवार रहेछ भन्ने देखायो । सबैभन्दा पहिला खानु पर्ने रहेछ र श्वस्थ हुनु पर्ने रहेछ भन्ने सन्देश पनि दिएको छ ।
सुरुवातमा नै त्रास र आतंककोबीचमा राज्यले लकडाउन गर्‍यो तर प्रभावकारी ढंगले कुसल व्यवस्थापन गर्न नसक्दा रोग र त्यसको प्रकृती, पार्ने प्रभावको पुर्वानुमानको आभव र अनियन्त्रित पास वितरण प्रणालीले घरमा भन्दा सडकमा बढी मानव ताती देखिन पुग्यो । शुरुका दिनमा आतंकित भएपनी पछिल्ला समय धर्ना, जुलुसले गती लियो । जसको कारण समुदायमा रोग फैलिन सहयोगी बन्यो । पुर्व तयारी, सम्भावित परिणाम र विश्वभरीका समाचारहरु सुन्दै नेपालीहरुको आत्मबल र जीवनशैलीको दम्भसहित बेसार पानीका कथामा चार महिना बिते । आज दिन प्रतिदिन भयावह हुँदैछ । यो रोग न प्रहरीले न प्रशासनले न क्षेप्यास्त्रले नै रोक्न सक्छ, रोक्न सक्छ त जनसमुदायको आत्मअनुशासनले । तर पछिल्लो दुई महिना लकडाउन खोलेपछि स्थिति फेरि भयाभव भएको छ । जनताको मनोविज्ञान भयंकर त्रास, सामान्यीकरण र फेरि भयावह अवस्थामा देखिनु र मानिसहरु अक्रमण्यतामा फसेको परिस्थिती छ ।
संसारको कुनै पनि युद्ध, अभियान, रोगहरु सामुहिक एकताबद्ध र एकिकृत भएर मात्रै जितिन्छ । शक्ति राष्ट्रका शक्तिशाली मानिसहरु पनि यो रोग सँग लड्ने तरिकामा छुट्टै र भिन्न प्रकृतीका देखिदैनन् । स्रोत, साधन साथै परिचालनको हिसाबले उच्चतम प्रविधिमैत्री नै होलान् । तर व्यवस्थापन आ-आफ्नो देश, काल, परिस्थिती र समय सापेक्षित नै हुने गर्दछ । नेपालको सन्दर्भमा पनि नेपालकै अनुकुलतामा योजना बनाउनु पर्दछ । जनसमुदाय, जनप्रतिनिधि र सरकारको संयुक्त प्रयासले मात्र भाइरस परास्त गर्न सकिन्छ ।
कोरोना कहाँबाट जनसमुदाय मा फैलियो? स्वास्थ्यकर्मी, मजदुर, किसान, व्यवसाहिक प्रतिष्ठान, सरकारी कार्यलय, वित्तिय संस्था, सुरक्षाकर्मी पत्रकारबाट, यसको पहिचान गरी सत्य तथ्य पत्ता लगाउनका लागी जनस्वास्थ्य विज्ञ, समाजशास्त्रीहरुको एउटा टिम बनाई फाष्टट्र्याकमा प्रतिवेदन लिएर सोही अनुसार, लकडाउन, कर्फ्यू के लगाउने हो लगाउनु पर्छ, लगाउदा कोभिड १९ लाई नियन्त्रण गर्न व्यवहारिक र बैज्ञानिक व्यवस्थापन हुनेछ ।
समुदायमा कोरोना भाइरस गइसकेको हुनाले जनस्तरमा व्यवस्थित योजना बनाएर स्वास्थ्य सम्बन्धित सम्पूर्ण निर्धारित मापदण्ड लागू गराउनेमा लाग्नु पर्दछ ।
सामाजिक सद्भाव कायम गर्ने, रोग कुनै पनि समय आँफै लाग्न सक्छ । हरेक मानिस हरेकको लागि सहयोगी हुन सक्छ भन्ने कुरा समाजमा स्थापित गर्नुपर्दछ ।
कोरोना भाइरसका विरुद्ध अग्रपंतिमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र पत्रकारलाई सम्मान, सहयोग, हौसला र माया गर्ने बातावरण बनाउनु पर्दछ ।
सम्पूर्ण जनसमुदायमा सामाजिक संजालबाट नकारात्मक, मनोबल गिर्ने र हतोत्साही हुने बिषय राख्दै नराख्ने, सकारात्मक सोचको विकास गरी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गर्नुपर्दछ ।
गाँउ समाज, टोलमा सम्भावित संक्रमितका बारेमा प्रारम्भिक अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने र लक्षण नजिक भएका, सामान्य लक्षण देखिएका र पूर्ण लक्षण देखिएका पहिचान गरी सम्बन्धित अस्पतालमा लैजाने र वडाको जनप्रतिनिधि प्रहरीलाई खबर गर्ने ।
शंका र उपशंका कै भरमा कारोना प्रभावित क्षेत्र, घर मान्छे भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ती सामाजिक संजालमा नराख्ने
सरकारको भूमिका (केन्द्र , प्रदेश, स्थानिय)
सरकारको भूमिका सन्दर्भमा हरेक नागरिकको जन्मदेखि मृत्युसम्म सम्पूर्ण अभिभावक सरकार नै हो । राज्यले भूमिका, कर्तव्य, अधिकार सम्पूर्ण प्रयोग गर्नुपर्दछ । भाइरसको कारण ठुलो विपत्ति आउनेवाला छ, र छिटो भन्दा छिटो सरकारले आफ्नो टिम निर्माण गर्नुपर्दछ ।
सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने कामहरु :
-स्थानीय सरकारलाई अधिकार, स्रोत र परिचालनको पुर्ण जिम्मा दिएर केन्द्र प्रदेश सरकारले प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्दछ ।
-सरकारले आफ्नो पालिकामा भएका अस्पताल, स्वास्थ्यकर्मी र अन्य व्यवस्थापनका कर्मचारीहरुको एकिन तथ्याङ्क संकलन गर्दा जनशक्ति बाँडफाड गर्नुपर्दछ ।
-आफ्नो पालिका अन्तर्गत सरकारी, शिक्षण अस्पताल, गैरसरकारी र निजि अस्पतालहरुको संख्या निर्धारण, सामुहिक छलफल र स्थानिय सरकार ऐन २०७४ को प्रयोग गरेर वास्तविक जनशक्ति उपलब्धता र सम्भावित जोखिम न्युनिकरण गर्नुपर्दछ ।
-दायित्वहरु सहिसलामत हुनुपर्दछ र बिरामी आउने बित्तिकै चेक जचाउने र बिरामोको अवस्था हेरेर अस्पताल वा होम आसोलेसनमा पठाउनु पर्दछ ।
-सरकारले एउटा सार्वजनिक सुचना जारी गरेर हस्पिटल, आइसोलेसन, आइसियु र भेन्टिलेटरका निर्धारित मापदण्ड के कसरी हुन्छ लागु गराउँनुपर्दछ ।
-स्वास्थ्यकर्मी र कुनै पनि नागरिकलाई सामाजिक रुपमा बदनाम गराउने जस्ता कार्य तुरुन्तै रोक्नुपर्दछ ।
-सरकारले अहिलेसम्म गरेको तयारी हेर्दा हिट एण्ड ट्रायल नै देखिन्छ । पुर्व अध्ययन, पुर्व अनुमान विश्लेषण भन्दा प्रयोग गरेर परिणाम हेर्ने विधि प्रयोग भएको देखिन्छ । यसलाई फेरेर विज्ञ सहित टिम बनाएर योजना बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
-लकडाउन घोषणा गर्ने पास प्रणाली अव्यवस्थित र अस्तव्यस्त देखिएको तथा विगतमा लकडाउनमा घर बस्ने भन्दा पास लिएर ढुल्ने धेरै देखियो । जसका कारण कोरोना समुदायमा फैलिएको छ ।
– स्वास्थ्य संस्थामा कृयाशिल स्वास्थ्यकर्मी मुख्य त डा. हरुले गर्ने क्लिनिकल अभ्यास, धेरै हस्पिटलमा गर्ने र बिरामीहरु संक्रमित भएपछी फैलिने देखियो।
-उपचारले भन्दा रोकथामले बढी जिन्दगी बचाउने रहेछ । स्वास्थ्य मापदण्ड लागू गर्न निर्मम बन्नुपर्छ ।
अन्त्यमा, देशलाई खेलाडी, कलाकार, इन्जिनियर पनि चाहिन्छ त्यो भन्दा पनि स्वास्थ्यकर्मी नै चाहिन्छ । स्वास्थ्य नै धन रहेछ । आज अरबपतिहरुका पैसा कागजमा परिणत हुँदै छ । संसार आज विचलित छ । हरेक घरमा हरेकको मनमा कोरोना प्रवेश गरेको छ । र मानिसहरुलाई, मानवसभ्यतालाई र समाजलाई नै चुनौती थपिदिएको छ । प्रकृतिभन्दा माथि तपाई हामि कोहि पनि छैनौं । यो विपदको घडिमा आफुले सकेको सहयोग गरौं । आफू पनि बचौं । अरुलाई पनि बचाऔं । यो भाइरस कोभिड १९ भन्ने चिजले धनी, गरिब, कालो,गोरो,महिला, पुरुष, कर्णाली, भोजपुर, रसिया, युरोप, अमेरिका केही भन्दो रहेनछ । सबै कुरा वर्गिय हुन्छ भन्ने कुराको शिक्षा काम लाग्दो रहेनछ । संक्रमणको त्रास भन्दा संक्रमित भएपछिको सामाजिक बहिष्कार र तिरस्कार कयौं गुना पीडादायी हुन्छ । त्यसैले हामी सबै मिलेर सामुहिक रुपमा सामना गरौं, कोरोना भगाऔं।
(लेखक आरसी अधिकारी नेकपाका युवा नेता हुन्)